Ubuso obu-6 bokungafi kuka-Monte Cristo ngu-Alexander Dumas | Uncwadi lwangoku
Ubuso obuyi-6 bubalo lokungafi kuka-Monte Cristo ngu-Alexander Dumas
URobert Donat, uJorge Mistral, uPepe Martín, uRichard Chamberlain, uGerard Depardieu noJim Caviezel.
Ubalo lweMonte Cristo Ngenye ye ezakudala ezaziwa kakhulu ngalo lonke ixesha kunye nombhali wayo, isiFrentshi UAlexander dumas ubawo, lukhulu kuncwadi lwehlabathi. Yapapashwa ngo 1844 Kwaye ukusukela ngoko oku Ukuphindezela ibali ngokugqwesa Akayekanga ukuthakazelisa. Mhlawumbi siyibonile ngaphezu kokufunda, kodwa ngokuqinisekileyo iyayithanda njengoko injalo.
Kule miboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude kule minyaka idlulileyo U-Edmundo Dantès Uye waninzi ubuso. Ndikhethe bobathandathu aba badlali: i-Briton, i-Spaniards ezimbini, i-North America ezimbini kwaye, kunjalo, i-French. Kwaye ngokobuqu ndikhetha amaFrentshi.
2 URobert Donat
3 UJorge Mistral
5 URichard Chamberlain
6 UGerard ukususwa
7 UJim Caviezel
UEdmond Dantès, intombi yakhe Mercedes, abbe Faria, UFernand Mondego, UEarl weMorcet, ibaron IiDanglars, Umtshutshisi Villefort, i Ngaphezulu, Icadultse, isicaka UBertuccio, nkosazana IHaydeeNgumgulukudu uLuigi Wampa… Akunakwenzeka ukubiza abalinganiswa abaninzi kule noveli isixelela ngesicwangciso sobuchule sokuziphindezela komatiloshe oselula uDantès emva kokutyholwa ngokungekho sikweni ulwaphulo-mthetho ukuba akazibophelelanga uFernand Mondego, umhlobo onganyanisekanga omngcatshayo.
Bakhe 20 iminyaka kwizisele zase inqaba ka If, yenye yezona ndawo zimbi kakhulu kuncwadi. Ubuhlobo bakhe no-Abbe Faria, ngubani oza kumxelela ngendawo apho a ubutyebi obukhulu. Ukubaleka kwakhe kunye nokuguqula abe ngu isityebi nendoda enamandla ukuba uyakunikela bonke ubomi bakhe ukuziphindezela kwabo bamtshixileyo bamshiya engenanto… Sonke sinemifanekiso eyahlukileyo, okanye sikhetha omnye nomnye, malunga nembali yendalo iphela. Kodwa sonke sabelana ngeemvakalelo ezifanayo kwaye umnqweno ofanayo wokuziphindezela. Obu bobunye bobuso obamphilisayo kwiscreen.
Enye yeenguqulelo zokuqala. Ukusuka 1934, wayalathisa URowland V. Lee kwaye wabonakala kuyo URobert Donat, umdlali we-English okwabizwa ngokuba yindima yakhe Amanyathelo angama-39, Hitchcock, okanye Sala kakuhle Mnu Chips.
Ukuqala kwi 1953, le nguqulo yase-Argentina yayijolise kuyo ULeon Klimovsky kwiskripthi sakhe esisekwe kwinoveli. Yayinenkwenkwezi kumdlali weValencian kunye neenkwenkwezi ezinkulu zelo xesha ngubani UJorge Mistral, kulonwabo oluzele bubuhle.
Kwakukho 1969 xa I-TVE Ikhuphe isiqendu sokuqala kolu thotho Ubalo lweMonte Cristo, yeluswa nguwe UPedro Amalio Lopez. Iphambili yayo yayingu impumelelo enkulu ephakamise zombini uthotho kunye nomlinganisi ophambili, umdlali weCatalan Pepe Martin, engazange iphindaphinde udumo olungaka. Kwezona nostalgic ungabona zizalisekile zombini I-la carte evela kwi-RTVE njengoko Youtube.
Le mveliso ibumbeneyo IGreat Britain kunye ne-Itali isuka 1975. Inkwenkwezi kwi URichard Chamberlain ngokusemandleni akhe, ekhatshwa ngabanye abadlali besimo se UKate nelligan (IMercedes), UTony Curtis (mongo), UTrevor Howard (Abbé Faria) okanye ULouis Jourdan (IVillefort).
Kwaye awunakuphuthelwa ongumlingisi ongumFrentshi ongacacanga ukudlala nje kuphela uEdmond Dantès, kodwa nabanye abalinganiswa ezinkulu uncwadi French ezifana D'Artagnan, Portos, Cyrano de Bergerac okanye uJean Valjean okanye eyakhe UAlexander dumas. Ngaba Imisebenzi Umabonakude we Iziqendu ezili-4 isuka 1998 kwaye siyibonile amaxesha ngamaxesha sele iphinda yenziwe nayiphi na ijelo.
U-Depardieu wayehamba kunye oonyana bakhe ababini kwindima yesibini, isiTaliyane U-Ornella Muti, okanye eyona Gallic cinema ifana UJean Rochefort o Pierre Arditi. Ndihlala ndincoma ukubona iinguqulelo zantlandlolo zayo yonke into, kwaye kolu ngcelele ngokukodwa, nangona i-dubbing yaseSpain yayilungile kakhulu ngeRamon Langa ebalaseleyo njengesiqhelo.
Ekugqibeleni ngo-2002 sabona le movie, Impindezelo ye-Count of Monte Cristo, owalathisa Kevin Reynolds. Yayinguqulo ekhululekileyo noko, kodwa igcina ubuncwane bomsebenzi. Yadlala inkwenkwezi kumdlalo wamazwe aphesheya kunye noMntla Merika UJim Caviezel, wase-Australia UGuy Pearce (Mondego), waseIreland URichard Harris (Abbe Faria) okanye iBritane UJames frain (IVillefort).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ubuso obuyi-6 bubalo lokungafi kuka-Monte Cristo ngu-Alexander Dumas
ÁLVARO IIMPAWU ZE-CID DE LEÓN sitsho
Alithandabuzeki elokuba zininzi iinguqulelo zeCount of Monte Cristo, kodwa akukho mntu ukwazileyo ukubamba ibali eliyinyani, nangona impindezelo ingoyena mdlali uphambili, uthando lusengumdlali oxhasayo, kuba ekugqibeleni is out of love Yiza undixolele ngothando
kunzima kanjani ukuba kule ngxelo inye bathi «... UFernadno Mondego, loo mhlobo unganyanisekanga umngcatshayo»
UFernando akazange abe ngumhlobo wakhe, ngokuchaseneyo, wayeyimbangi yakhe; Ewe, wayengumzala weCatalan Mercedes, awayefuna ukutshata naye, kodwa wayethandana noDantes
Phendula kwi- VLVARO FLORES CID DE LEÓN
"Emva kobumnyama." Incwadana efanelekileyo yokuqala kunye noHaruki Murakami.